Shasha, Luis Iván Cuende, uye hurukuro yake paLinuxadictos.com | Linux Vakapindwa muropa
Zororo pasirese remahara software neLinux kunyanya, ndakatanga kuita chimwe chakasiyana. Nechikonzero ichi, ndakafunga nezve mumwe munhu aimiririra yemahara software mamiriro munyika medu zvakanaka uye ari nani kupfuura iye "kubvunzurudza". Ini ndinotaura nezvazvo Luis Iván Kuverenga.
Pakutanga zvaiita sekushinga kwandiri, asi kana ukasaedza chimwe chinhu hauzomboziva kana zvichigona kuitwa. Saka ndakamutumira email kuti ndibvunze kana ndichigona kumufadza indavhiyu uye rimwe zuva ndakagamuchira email mubhokisi rangu reGmail umo, nemutsa kwazvo, akapindura hongu. Zuva rimwe chetero husiku, ndakatanga kufunga nezvemibvunzo uye ndosarudza mimwe yacho kuti ndivatumire kwaari uye heino mhedzisiro:
Nhanganyaya - Luis Iván Cuende, murume wechidiki, anobva kunyika yaFernando Alonso, uyo pazera remakore gumi nemaviri chete akawana kuda kwake kwemahara software uye akagadzira yake yega yekushandisa system. Vakanga vari baba vake vakaunza pamba mahara software CD uye vakatanga kugadzirisa kodhi yekodhi. Pazera ramakore gumi nemashanu, akazove mukwikwidzi weEuropean pasi pemakore gumi nemasere, nekuda kweAsturix (kugoverwa kweLinux kwakatoshandiswa munyika dzinopfuura makumi maviri senge US, Canada, Iceland, Russia, Spain, nezvimwewo. kukwikwidza kweHackNow. NaAsturix, pamwe nevechidiki kambani Holalabs, vakazvimisikidza seimwe ye12 inonyanya kukosha kutanga-kondinendi yekare. Kugovera kwacho kwaive kwekutanga kuisa kuzivikanwa kwechiso, kunyangwe pamberi peGoogle. Kugadziridza uye nerusununguko zvinofambidzana nekutenda kune vaviri venyika nyanzvi, Luis Iván naAlberto Elías. Uye ini ndinosimbisa hunyanzvi, nekuti ... Vangani venyu vangati mune kambani ine makore gumi nematanhatu chete? Luis akataura kuti anoshanda pamwe neAnonymous uye ndiye mugadziri wemitsara yakadai se "Sisitimu yekudzidzisa yeSpain inouraya zvisikwa" kana "Vezvematongerwo enyika vari kutinyepera." Ndiri kufara kuti pane mumwe munhu anoziva chokwadi chatiri kurarama, pakati pebenzi rakanyanya rinoita kunge rakavharwa kumeso.
Zvino toenda ku Mibvunzo, Mhinduro…:
IPE - Chii chinoita zvakasiyana kubva Asturix kubva kune mamwe ma distros?
LIC - Kurerukirwa kwekushandisa mukuvandudza. Zvese zvakagadzirirwa mushandisi wekupedzisira, wezuva nezuva, asi asingatyi kuunza zvitsva zvinokanganisa.
IPE - Sei Ubuntu sehwaro?
LIC - Ndiyo inotsigirwa kwazvo, uye kushandisa maDebian mapakeji kunobatsira. Izvo zvakare zvakagadzirirwa zvakanyanya kune mushandisi wese.
IPE - Nharaunda yeAsturix yakabata sei nevanofara UEFI Yakachengeteka Boot?
LIC - Ichokwadi ndechekuti isu tiri vakanyanya kutsoropodza. Ini, kubva pachinzvimbo changu seye chipangamazano kuna Visi-Mutungamiriri weEuropean Commission, ndiri kuyedza kuti zviitwe zvichipesana Microsoft yekufarira iyi monopolistic uye inopesana nemakwikwi mamiriro.
IPE - Mazhinji makomendi asina kunaka pamusoro peshanduro dzekupedzisira dze KDE uye GNOME ... Chero chinhu chekutaura nezvazvo?
LIC - Nharaunda dzese dzinoita sedzakanaka kwandiri, asi ndinofunga dzinoomesera kuvapo zvakanyanya. Ndokusaka takagadzira yedu yega AsturixOn desktop nharaunda. KDE inoita kunge yakaoma uye inorema kwandiri. GNOME yaita sarudzo dzinotyisa kubva kune yemushandisi chiitiko chekutarisa. Zvisinei, chikuru nezve software yemahara ndechekuti munhu wese anogona kuve nemaonero avo uye kushandisa chero chavanoda.
IPE - Iwe wakati Mac inokuita claustrophobic. Iwe unofungei nezvekufamba kwaMiguel de Icaza akananga kumaapuro masystem?
LIC - Nhasi kune chinhu chinotonhorera chekushandisa apuro. Kunyangwe software yayo ichitaridzika kunge yepamusoro, Linux haina kana chekugodora. Ndine kakunyadziswa maonero angu kuna Miguel, asi ndihwo hupenyu hwake uye akasununguka kuita chero chaanoda.
IPE - ndakunzwa uchitaura nezvazvo Firefox OS. Anotenda izvozvo Tizen zvinokudzikisira here?
LIC - ndinofunga kudaro nekuti ine Samsung kuseri kwayo. Asi mumaonero angu Firefox OS ichave inokunda kwenguva refu. Mozilla isangano risinganetsi uye kuvhurika kwayo hakusi kwekambani.
IPE - Chii migove nyika dzaungasimudzira (kuwedzera kune yako)?
LIC - Zvakaomarara ... mazhinji acho anogona kusagadzira kana kufa. Izvo hapana zvandinowana chaizvo zvinonakidza.
IPE - Iwe unofunga Linux kupatsanurwa (iyo hapana mamiriro yekuparadzirwa kwakawanda) idhonza here?
LIC - Kuti usvike kumusika mukuru, hongu. Kuti vashandisi vafare nehurongwa hwavo, kwete. Zvisinei, pane zvakajairika kugoverwa senge Ubuntu kana Mint zvinoita kunge kuri kuwana mugove wemusika mukuru.
IPE - Makambani mazhinji e videogames vakaisa maziso avo paLinux senzvimbo yakanaka ye mitambo. Nei ikozvino kana uye pamberi peWindows chete paiita kunge pavari?
LIC Nekuti Microsoft yakaparadza Windows ine vhezheni 8. Iyo ndiyo yakaipa kwazvo sisitimu yekushanda yandati ndamboona. Saka zvakajairika kuti makambani atendeukire kune yakakwana, yakagadzikana uye inoshanda system senge iyo inotorwa kubva kuLinux.
IPE - Ndakaverenga zvinyorwa pamusoro pevakadzi uye yemahara software ... muenzaniso ndewe Sarah Sharp. Iyo projekiti yeAsturix ine mugadziri?
LIC - Kwete, chirongwa ichi chagara chakavhurwa asi hapana mugadziri akambopinda. Iko hakuna zvakanyanya kufarira mune iro basa pane iro rechikadzi bonde.
Ndinovimba wakazvifarira. Parizvino chikamu chine chekuita neLinux, asi unogona kuwana iyo hurukuro yakazara en bhurogu yangu.
Mamwe mashoko - Kuongororwa kweakanakisa uye mashoma eRinux kugoverwa kwe2013, HispaLinux anomira kuMicrosoft, Tizen anoti kuonekana naSamsung kubva kuApple, Blizzard Varaidzo kukunda Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Kubvunzana naLuis Iván Cuende mune scoop yeLinuxadictos.com
DraftSight yemahara AutoCAD dombo yeLinux yakanyatsogadziriswa